သင်္ဘောပင်စိုက်ပြီး အသားထူထူ အစေ့နဲနဲပြွတ်ခဲနေအောင် သီးစေသောနည်း – All Update News
သင်္ဘောပင်စိုက်ပြီး အသားထူထူ အစေ့နဲနဲပြွတ်ခဲနေအောင် သီးစေသောနည်း
November 9, 2021 - by admin2 - LeaveaComment
အ ေစ့ ကို တစ္ ရက္ ေန လွန္း ၿပီး ပ်ိဳး ပင္ ေဖာက္ ပါ။ အဲ့ ဒီ ပ်ိဳး ပင္ ေလး (၇-ရက္) ျပည့္ တဲ့ အ ခါ ခြဲ စိုက္ မယ့္ ေန ရာကို…. (၁) တြင္း ဝ တစ္ ေပ၊ အ နက္ တစ္ ေပ ခြဲ တူး ၿပီး တြင္း ထဲ ကို သစ္ ႐ြက္ ေျခာက္ ျဖစ္ ေစ…ေကာက္ ႐ိုး ေျခာက္ ျဖစ္ ေစ ထည့္ ၿပီး မီး ရႈိ႕ ပါ။ႏွစ္ ႀကိမ္ ျပဳ လုပ္ ရန္ လို အပ္ ပါ သည္။ ျပာ က် ၿပီး တာ နဲ႔ တြင္း ထဲ ကို ေရ အ ျပည့္ ေလာင္းၿပီး တစ္ ည ထား ပါ။
(၃) လၻက္ရည္ဆိုင္ေတြမွာစြန႔္ပစ္စုပုံထားၾကတဲ့ႏွပ္ၿပီးသားအခ်ိဳေျခာက္အဖတ္ေတြကိုယူႏြားေခ်းေျခာက္ႏွင့္ဆတူ ေရာသမေမႊၿပီးတစ္ေနလွန္းပါ။ၿပီးလွ်င္တြင္းထဲသို႔ တစ္ထြာခန႔္ထပ္ျဖည့္ပါ။
၎ အေပၚမွထပ္မံ ၍ ေျမေဆြးအျပည့္ထည့္လိုက္ၿပီးပ်ိဳးပင္ကိုစိုက္ပ်ိဳးပါ။(၄) ပ်ိဳးပင္(၂-ေပ)ခန႔္ႀကီးလာတဲ့အခါအပင္ရင္းပတ္လည္ကို မီးဖိုကရတဲ့ျပာမႈန႔္၊ မီးေသြးမႈန႔္ေတြကို အုံထားေပးပါ။
နံနက္ေစာေစာႏွင့္ ေနဝင္ၿပီခ်ိန္၌တစ္ေန႔ႏွစ္ႀကိမ္ ေရမွန္မွန္ေလာင္းရပါမယ္။မွတ္ခ်က္ အဝါေရာင္အသားရွိတဲ့သေဘၤာသီးကိုအနီေရာင္ျဖစ္ေစခ်င္ရင္ေတာ့ေအာက္ေျခမွာျဖဴးထားတဲ့ထုံးမႈန႔္ကိုမီးေသြးအမႈန႔္နဲ႔ဆတူေရာစပ္ၿပီးစိုက္ပါ။
C red i t # t haiag r i c u l t u remaga z i n e
အ စေ့ ကို တစ် ရက် နေ လှန်း ပြီး ပျိုး ပင် ဖောက် ပါ။ အဲ့ ဒီ ပျိုး ပင် လေး (၇-ရက်) ပြည့် တဲ့ အ ခါ ခွဲ စိုက် မယ့် နေ ရာကို…. (၁) တွင်း ဝ တစ် ပေ၊ အ နက် တစ် ပေ ခွဲ တူး ပြီး တွင်း ထဲ ကို သစ် ရွက် ခြောက် ဖြစ် စေ…ကောက် ရိုး ခြောက် ဖြစ် စေ ထည့် ပြီး မီး ရှို့ ပါ။နှစ် ကြိမ် ပြု လုပ် ရန် လို အပ် ပါ သည်။
ပြာ ကျ ပြီး တာ နဲ့ တွင်း ထဲ ကို ရေ အ ပြည့် လောင်းပြီး တစ် ည ထား ပါ။
(၃) လ္ဘက်ရည်ဆိုင်တွေမှာစွန့်ပစ်စုပုံထားကြတဲ့နှပ်ပြီးသားအချိုခြောက်အဖတ်တွေကိုယူနွားချေးခြောက်နှင့်ဆတူ ရောသမမွှေပြီးတစ်နေလှန်းပါ။ပြီးလျှင်တွင်းထဲသို့ တစ်ထွာခန့်ထပ်ဖြည့်ပါ။
၎င်း အပေါ်မှထပ်မံ ၍ မြေဆွေးအပြည့်ထည့်လိုက်ပြီးပျိုးပင်ကိုစိုက်ပျိုးပါ။(၄) ပျိုးပင်(၂-ပေ)ခန့်ကြီးလာတဲ့အခါအပင်ရင်းပတ်လည်ကို မီးဖိုကရတဲ့ပြာမှုန့်၊ မီးသွေးမှုန့်တွေကို အုံထားပေးပါ။
နံနက်စောစောနှင့် နေဝင်ပြီချိန်၌တစ်နေ့နှစ်ကြိမ် ရေမှန်မှန်လောင်းရပါမယ်။မှတ်ချက် အဝါရောင်အသားရှိတဲ့သင်္ဘောသီးကိုအနီရောင်ဖြစ်စေချင်ရင်တော့အောက်ခြေမှာဖြူးထားတဲ့ထုံးမှုန့်ကိုမီးသွေးအမှုန့်နဲ့ဆတူရောစပ်ပြီးစိုက်ပါ။
Previous Article ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံက ရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာ ပွဲဦး ထွက်ပြသမယ့် အကယ်ဒမီ မျိုးသန္တာထွန်း ပါဝင်ရိုက်ကူးထားတဲ့ ‘ပြေလျော့နွေ’ ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်း
Next Article ညီအစ်မနှစ်ယောက် ကို တစ်ပြိုင်တည်း အမွှာပူကိုယ်ဝန်ရခဲ့ပြီး အမွှာကလေးများ တစ်ချိန်ထဲ မွေးဖွားစေနိုင်ခဲ့သူ စွမ်းဆောင်ရည့်ပြည့်ဝသူ အမျိုးသား